सात वर्षपछि बायर्न च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा, पिएसजीसँग उपाधि भिडन्त – Sandesh Munch
सात वर्षपछि बायर्न च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा, पिएसजीसँग उपाधि भिडन्त
August 20, 2020 110
बायर्न २०१३ पछि पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फाइनल पुगेको हो । बायर्नले अब उपाधिका लागि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)सँग खेल्नेछ । पिएसजीले पहिलो सेमिफाइनलमा जर्मनीको आरबी लाइपजिगलाई पराजित गरेको थियो ।
लियोनले खेलको सुरुवातमै गोलको अवसरहरु बनाए पनि गोल गर्न नसक्दा अग्रता लिने अवसर चुकायो । बायर्नले भने मौका गुमाएन । १८औं मिनेटमा सर्जी नाब्रीले उत्कृष्ट गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाए । ३३औं मिनेटमा नाब्रीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै बायर्नको अग्रता दोब्बर पारे ।
खेल सकिन दुई मिनेट अघि रोवर्ट लेवान्डोस्कीले गोल गरेपछि बायर्नले ३-० को जित हात पारेको हो ।
बायर्न र पिएसजी बीचको फाइनल खेल अगष्ट २३ मा हुनेछ ।
बायर्न र पिएसजी बीचको फाइनल खेल अगष्ट २३ मा हुनेछ ।#onlinekhabar
Prevको’रोना संक्र’मितको अनुभव : ‘बाफ लिएँ, कागती पानी र बेसारपानी पिएँ’
Nextबैंकले घटाए बेस रेट, ऋणको ब्याज कुन बैंकमा सस्तो ?
जसले खोप पत्ता लगाए नि अ*मेरिकालाई को*रोनाको खोप निशुल्क दिनुपर्ने
साप्ताहिक राशिफल : असार ६ गते शनिबार देखी असार १२ गते शनिबार सम्मको
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83233)